Miovaova haingana ny fahazarana mizaha mailaka | Martech Zone
Alatsinainy, Septambra 19, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
Ity infographic tsy mampino avy amin'ny Litmus mampiseho ny fiovana mahery vaika amin'ny fitondran-tena amin'ny mailaka tamin'ny taona lasa! Avy amin'ny sary:
Ny mailaka dia mijanona ho hetsika an-tserasera mahery indrindra manerantany. Raha ny tena izy, ireo mpampiasa mailaka dia antenaina hahatratra 3.8 miliara amin'ny taona 2014; izany dia efa ho ny antsasaky ny mponina eto an-tany ankehitriny, ary fiakarana lehibe avy amin'ny mpampiasa 2.9 miliara notaterina tamin'ny taona 2010. Ary ankehitriny ny ankamaroany dia manana finday smartphone sy iPads, mbola misy mandroso ihany ve hijery ny hafatrao amin'ny monitor? Eto isika dia mijery ny fomba nanovan'ny finday sy ny "kilalao" teknolojia hafa ny fomba fahitantsika ny mailaka.
WordPress rel = "prev" ary rel = "manaraka"
23 Septambra 2011 à 4:44
lahatsoratra mahafinaritra! Saripika mahafinaritra sy fampahalalana tena tsara, mora vakiana. Ny mpanjifanay ao amin'ny EmailList.net dia mitatitra fikarohana mitovy amin'izany mifototra amin'ny famakafakana azy ireo sy ny anay ihany koa. Mbola matanjaka be ny mailaka amin'izao fotoana izao ary ny fahitana ny antontan'isa tahaka izao dia vao mainka matoky ahy fa manome serivisy sarobidy ho an'ny mpanjifanay izahay!
Misaotra ny lahatsoratra!